Shaqaale ajnabi ah oo la shaqeeya Qaramada Midoobay Soomaaliya oo laga helay coronavirus - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShaqaale ajnabi ah oo la shaqeeya Qaramada Midoobay Soomaaliya oo laga helay coronavirus
March 27, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Sumada Qaramada Midoobay.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shaqaale ajnabi ah oo la shaqeeya howlgalka Qaramada Midoobay ee gudaha Soomaaliya ayaa laga helay coronavirus, Qaramada Midoobay ayaa sidaas ku sheegtay war-saxaafadeed maanta oo Jimce ah.
“Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay xaqiijineysaa in shaqaale ka mid ah qandaraasle shirkadeed oo ay wadato Qaramada Midoobay in laga helay cudurka coronavirus (COVID-19).” War-saxaafadeedka ayaa sidaa lagu sheegay.
“Qandaraaslaha ayaa sideed maalmood karantiil ku jiray ka hor inta aan laga baarin cudurka waxaana xirfadlayaasha caafimaadku ay wareysanayaan shaqsiga si ay ula socdaan xiriirka qofkaas.” War-saxaafadeedka Qaramada Midoobay ayaa intaas ku daray.
Soomaaliya ayaa horey u xaqiijisay labo kiis oo Covid-19 ah kadib markii labo muwaadin oo Soomaali ah oo dhawaan dalka dibadiisa ka soo noqday laga helay fayruska.
April 21, 2020 73 kiis oo cusub oo coronavirus ah oo laga helay Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ka dhacay meel u dhow huteel kuyaala Muqdisho galabta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen masuuliyiin katirsan [...]